Disc Akaputsa Caliper, Electric kupaka akamedura, Trailer Zvikamu - KTG
Tiri nyanzvi mukugadzira nekugadzira auto brake calipers, trailer brake caliper, EPB, brake caliper kugadzirisa kits, disc brake caliper zvikamu zvinosanganisira piston, actuator, brake rubber bush zvichingodaro.
Chinja disc rakaputsa caliper
Kazhinji, mabhureki emabhureki akavimbika, uye anoda kutsiva kazhinji kashoma pane mapads nema disc, asi kana uchifanira kuchinja imwe ..
Zvigadzirwa zvedu zvinoshandiswa zvakanyanya mumotokari dzakasiyana: Passenger mota, SUV, mota dzekutengesa, chikepe tirera, tora-mota, uye zvichingodaro. Tichachengetedza kuchengeteka kwako munzira.
Tsiva mabhureki eturera
Panzvimbo iyoyo, vanamakanika uye vagadziri vemabhureki zvakafanana vanoratidzira kuchengetedza imwe yemhando kusiyanisa kubatsira mamiriro akajairika emabhureki ako. Aya akasiyana, akadai sehuremu hweturera yako ..
Rear Drive divi akamedura ...
Front akamedura Caliper fo ...
Mberi Passenger Rutivi R ...
NYAYA Magetsi mota 970 ...
Stainless Simbi Traile ...
Mberi dhisiki rakaputsa calip ...
Shure disc disc brake calipe ...
Disc akamedura caliper Spa ...
MutengoList yeiyo Yakakwira ...
Hot Sale nokuti Frozen Ca ...
KTG Auto yanga ichitarisa pakupa mabhureki eanomira kwemakore gumi uye inogara iri kumberi. Tiri mumwe nyanzvi nokutengesa akamedura caliper iri Shanghai. Tine huwandu hunopfuura zviuru zvitatu zveOE nhamba dzebhureki remabhureki mukatalog yedu, uye tinoramba tichigadzira zvigadzirwa zvitsva kupfuura mazana mazana maviri eOE gore rega. Isu tinopawo OEM / ODM sevhisi yebasa pane zvinodiwa. Tiri nyanzvi mukugadzira nekugadzira auto brake calipers, trailer brake caliper, EPB, brake caliper kugadzirisa kits, disc brake caliper zvikamu zvinosanganisira piston, actuator, brake rubber bush zvichingodaro.
Musiyano Betwee ...
Vese calipers havana kufanana. Kungofanana neese asina kuenzana mabhureki ekupfeka mapatani ari ...
Vadiwa vatengi, isu tichagadzirisa runyorwa rwechitsva prod ...